Health – Myanmar Scoop Arena
user | November 27, 2019
တို့ဆေးဟု လူပြောများနေသော်လည်း အမှန်မှာ အထူးပြုလုပ်ထားသည့် အပ်အသေးစားက လေးဖြင့် လူကိုယ်တွင်းသို့ လျှက်တပျက် ထိုးသွင်းလိုက်ခြင်းဖြစ်သည်ခြင်းကိုက်သလို စစ်ကနဲ့ စူးရှနာကျင်သွားမည်၊ ဌင်းဆေးအသားတွင်း ၀င်သွားသည်နှင့် စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်းမှာ မူးဝေလာမည်-အမြင်အာရုံဝေးဝါးကာ သတိလွတ်သွားမည် ထိုအချိန်မှာ သင့်ကိုအနားမှာ အလိုက်သင့်တွဲခေါ်သူနောက်ပါသွားရတာပါ။ သည်ဆေးဝါ့းတွေကတော့ တရားဝင် ဆေးဝါး မဟုတ်ပါ။ ခွဲစိတ်ရာမှာ သုံးတဲ့သူ မေ့ဆေးအမျိုးစား တွေ date
ကျောက်ကပ်က ခန္ဓာကိုယ်မှာရှိတဲ့သွေးတွေကို မိနစ် ၃၀ တစ်ကြိမ် သန့်စင်ပေးပါတယ်။ ကျောက်ကပ်ရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ဟာ အသက်ကြီးလာတာနဲ့အမျှ ကျဆင်းလာပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ကျနော်တို့ဟာ ကျောက်ကပ်ကို ဘေးဥပဒ်ဖြစ်စေမယ့် သောက်စရာတွေကို ရှောင်ကြဉ်ခဲ့မယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့ သန့်စင်စက်ကြီးဖြစ်တဲ့ ကျောက်ကပ်ဟာ ကျနော်တို့ရဲ့အဖော်မွန်ဖြစ်လာမှာ အသေအချာပါဘဲ။ မသောက်သုံးသင့်သော အဆိပ်ရေများ။ (၁) *** နို့လက်ဖက်ရည် ***
user | August 12, 2019
The readers do not like bean sprouts. In fact, if you eat bean sprouts and get health benefits. For those who want to lose weight, orafavorite